Mgbakwunye - AudienceGain Ltd AudienceGain Ltd Mgbakwunye AudienceGain Ltd
Ihe omume anyi nwere ike isonye. Ọ dị mfe ịbanye na-adịghị achọ ka ọ bụla oru ihe ọmụma. Mmemme mgbakwunye na-adịkarị n'ofe ịntanetị ma nye ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ ụzọ ndị ọzọ iji monetize weebụsaịtị ha.
Mgbe ị debanyere aha maka mmemme mmekọ anyị, a na-enye gị njikọ URL pụrụ iche ị nwere ike idowe n'ime weebụsaịtị anyị ma ọ bụ kesaa site na ozi-e ma ọ bụ ibe mgbasa ozi. Mgbe onye ọrụ pịa na otu njikọ gị pụrụ iche, a na-akpọrọ ha webụsaịtị anyị yana sọftụwia mmekọ anyị na-esoro ọrụ ha. Mgbe ha zụrụ, ị ga-enweta ọrụ.
Typedị Commission: Lezienụ 20% kwa ire ere.
Kwụ requirementsgwọ chọrọ: $ 100 USD-Opekempe nguzozi chọrọ maka ịkwụ ụgwọ.
Oge ịkwụ ụgwọ: A na-akwụ ụgwọ ụgwọ otu ugboro n'ọnwa n'ọnwa gara aga.
All ndị ọzọ nkọwa Jụọ .
Sonyere Ugbu a